Cimilada kulaylaha | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Cimilada
El cimilada kulaylaha Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu cadcad ee qof walba: heerkulka khafiifka ah ee wanaagsan sanadka oo dhan, muuqaalka cagaaran, xayawaanka iyo dhirta meel kasta ... Shaki la'aan, inbadan oo naga mid ah ayaa durbaba jeclaan lahaa inay ku raaxaystaan ​​cimilo sidan oo kale ah. Waxaa laga yaabaa in sababtaas darteed kuwa aadi kara halkaas iyagoo ujeedkoodu yahay inay ku qaataan fasax aan caadi ahayn.
Laakiin, sidee baa lagu gartaa cimiladan? Halkee ku taal? Laga soo bilaabo tan iyo waxyaabo kaloo badan aan ka hadalno tan gaarka ah.
1 Astaamaha cimilada Kulaylka
1.1 Waa maxay heer kulku?
1.2 Maalin joog
1.3 Dabaylaha kulaylaha
2.1 Cimilo kulul oo qoyan
2.2 Cimilo kulul oo qalalan
2.3 Cimilada kuleylka ah
3 Nolosha cimilada kulaylaha
Astaamaha cimilada Kulaylka
Waxay ku taal inta udhaxeysa 23º woqooyi latitude iyo 23º latitude koonfureed, cimilada noocan ah Waxaa lagu gartaa iyadoo leh heerkul celcelis ahaan ka sarreeya 18ºC. Dhaxanku weligood ma dhacaan, taasi waa, heerkulbeegga had iyo jeer wuxuu ka sarreeyaa 0ºC, mana aha oomane.
Cimiladan waxaan ku leenahay xagasha dhacdooyinka shucaaca qoraxda ee laga soo saaro gobolladan, taas oo ka dhigaysa heer kulka sare Qoyaanka jawiga sidoo kale aad ayuu u sarreeyaa. Intaa waxaa sii dheer, iyagoo ku yaal meel aad ugu dhow dhulbaraha, taas oo ah, dhulka dhulka ee ay dabaysha qabow ee mid ka mid ah cirifka sare ay kula kulmaan dabaylaha diirran ee ka soo horjeedkeeda, waxay leeyihiin nidaam cadaadis hooseeya oo joogto ah. Nidaamkan waxaa loo yaqaan aagga isku-xirnaanta is-dhexgalka, waxayna mas'uul ka tahay roobabku inay aad ugu badan yihiin qayb ka mid ah adduunka.
Waa maxay heer kulku?
Sidaan horay u aragnay, cimilada kulaylaha ma jiro wax dhaxan ah celceliska heerkulkuna wuxuu ka sarreeyaa 18ºC. Taas macnaheedu waa inaysan lahayn xilliyo sida aan ku leenahay gobollada qabow, halkaas oo guga, xagaaga, deyrta iyo jiilaalka si fiican loogu kala sooco. Haddii aad ku sugan tahay meel kuleyl ah, xagaa ama jiilaal ma jiro.
Sidoo kale, kala duwanaanshaha heerkulka maalintii oo dhan aad buu u sarreeyaa, illaa heer in oscillation-ka kuleylka maalinlaha ahi uu ka badnaan karo oscillation kaamerada sanadlaha ah.
Monsoon waa a dabayl xilliyeed kaas oo soo saara roobab mahiigaan ah iyo daadad. Maansada runta ah waa tan ka dhacda Koonfur-bari Aasiya, in kasta oo Australia, Ameerika iyo Afrika iyaguna laga soo saaro. Waxaa jira laba nooc: xagaaga iyo jiilaalka, maxaa yeelay dabayshu waxay bedeshaa jihada mid kasta oo ka mid ah.
Dabaylaha kulaylaha badanaa waa nooca kor u kaca, kuwaas oo ah waxa sababa horumarka daruuraha taagan mahadsanid taas oo muuqaalka muuqaalka lagu arki karo had iyo jeer cagaaran.
Waxaan u maleyn karnaa inay jiraan hal nooc oo kaliya, laakiin runtu waxay tahay inay jiraan dhowr, mid walbana leh waxyaabo u gaar ah. Waxay kala yihiin sidan soo socota:
Cimilo kulul oo qoyan
Cimilada noocan ahi waa 3º woqooyi iyo koonfurta dhulbaraha. Waxaa lagu gartaa yeelasho heerkulka diiran, iyo roob badan, oo ka badan 60mm / bishii. Waxay leedahay xilli gaaban oo qalalan, laakiin sanad walba 2000mm ayaa soo dhaca, taasoo ka dhigaysa muuqaalka mid cagaarnaan leh.
Waxay ku dhacdaa bartamaha Afrika, inta badan Koonfurta Ameerika, waqooyiga Australia, Bartamaha Ameerika, iyo koonfurta Aasiya. Tusaalooyin:
Equatorial: Waa cimilada kuleylka ah ee aan u maleyneyno mar kasta oo aan qiyaaseyno inaan maalmo yar ku qaadaneyno nasasho xeeb ay ku hareereysan yihiin geedo qumbaha ama aan gelayno hawdka halkaas oo ay ku yaalliin baqbaqaaq ama baqbaqaaq 🙂. Celceliska heerkulka sare waa 18ºC.
Monsoon: heerkulku wuu sarreeyaa sanadka oo dhan, roobabkuna waxay isugu urursadaan xilli-roobaadka.
Qeyb-dhul-baraha: Waxay leedahay xilli qalalan oo aad u gaaban iyo xilli roobaad dheer.
Cimilo kulul oo qalalan
Cimilada noocan ah waxaa laga helaa inta u dhexeysa 15º iyo 25º latitude, iyadoo ah meelaha ugu badan ee laga wakiil yahay Carabta, Sahel (Afrika), ama gobollada qaar ee Mexico ama Brazil. Waxaa lagu gartaa yeelasho xilli qalalan oo soconaya dhowr bilood, iyo roob kale. Heerkulku aad buu u sarreeyaa maxaa yeelay miisaanka hawadu wuu deggan yahay sidoo kalena waa qalalan yahay. Tusaalooyinka qaarkood waa:
Cimilada Sahelian: Waxay leedahay xilli aad u dheer oo qalalan oo qaata saddex meelood laba meel sanadka, xilligaas oo roobabku hoos u dhacaan inta udhaxeysa 400 iyo 800mm.
Cimilada Suudaan: Waxaa lagu gartaa inay leedahay xilliyo aad u gaaban laakiin aad u daran oo roob ah.
Cimilada kuleylka ah
Cimilada noocan ahi waxay aad ula mid tahay kulaylaha, in kastoo heerkulku wuu hooseeyaa (waxay kuxirantahay aagga, celcelis ahaan waa 17-18ºC) waana roob yar, sidaas darteed badanaa waxaa lagu kala saaraa cimilo dhexdhexaad ah. Qaar ka mid ah dhaxan aad u fudud ayaa dhici kara, laakiin tani caadi maaha.
Laga helay meelaha sida New Orleans, Hong Kong, Seville (Spain), Sao Paulo, Montevideo ama Canary Islands (Spain).
Nolosha cimilada kulaylaha
Xayawaanada ku nool meelaha leh cimiladan cajiibka ah waxay u muuqdaan inay leeyihiin midabyo aad u dhalaalaya, aadna u muuqda. Tusaale tani waa digaagga, sida baqbaqaaq. Qaar badan oo ka mid ahi waxay ku nool yihiin geedo, laakiin waxaa jira kuwo kale oo aan ka heli karno qoyan ama webiyada, sida abeesooyinka anaconda ama Python reticular. Laakiin halkan kuma noola shimbiraha iyo waxa gurguurta oo keliya, sidoo kale naasleyda, sida monos, ah caajis ama qaar ka mid ah dhadhanka, sida tigres, shabeellada o jaguars.
Haddii aan ka hadalno kalluunka iyo amphibians, halkan waxaan ka heli doonnaa piranhas hilib cun, toad bad weyn, xalaasha ama rah cagaaran oo indho cas taas oo soo jiidata fiiro gaar ah.
Dhirtu waxay u baahan tahay biyo si ay u baxdo, iyo marka cimiladu aad u wanaagsan tahay oo aad loo heli karo wax badan, wax kasta, oo ay ku jiraan nafaqooyinka iyo macdanta, oo ay gaadhaan dherer aan caadi ahayn: ilaa 60m. Laakiin dabcan, geed baaxaddiisu le'eg tahay wuxuu qaadanayaa boosas fara badan, maxaa yeelay wuxuu yeelan karaa taaj dhowr mitir oo dhexroor ah; Marka dabcan, dhirta ka soobaxda wax yar ee ka hooseysa waxay dhibaato badan ku qabaan koritaanka iyo gaaritaanka qaangaarnimada. Sababtaas awgeed, waxay umuuqataa inay jiraan geedo badan oo ka badan kuwa runta ah. Nasiib wanaag, dabiicigu aad buu dheecaan u yahay oo waxaa jira hiddo-wadayaal dhir ah, sida Begonia, oo bartay sida ugu badan looga faa'iideysto iftiinka iyaga gaara.
Tusaalooyinka qaar ee dhirta kulaylaha waa:
Cocos nucifera (geedka qumbaha)
Ficus benghalensis (fig qalad)
Mangifera indica (cambe)
Americana Persea (avokado)
Waxaan ku soo gabagabeyneynaa qorrax-dhaca quruxda badan ee kuleylaha. Ma jeceshahay? 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Cimilada Kulaylka
Tirada dadka halkaas ku nool ayaa la la'yahay
Ku jawaab Krattos
Waan jeclahay boggan, waxay i siisay dhammaan macluumaadka aan u baahanahay
Jawaab kooxaha bulshada
Fututy waajib ah dijo
Waxaan ubaahanahay inaan ogaado wabiyada jawigan maadaama aysan ka muuqan wikipedia
Kujawaab Ruty fruty
Cimilada buurta dheer